Baradho macaan oo lagu buuxiyey soy iyo boqoshaada qoraalka leh. Bezzia
Baradho macaan oo laga buuxiyey soy iyo boqoshaada
Maria vazquez | | Saladyada iyo khudradda
Maaha markii ugu horreysay ee aan ku diyaarinno baradhada macaan ee Bezzia. In yar ka badan laba sano ka hor ayaan buuxinay couscous iyo khudaar, Ma xasuusataa? Maanta waxaan soo jeedineynaa nooc cusub oo leh curyaanno iyo boqoshaada textured. A karinta vegan taas oo aan waxba ka maqnayn.
Dooni mayno inaan ku siriinno, cuntadani kuma diyaarinayso 10 daqiiqo. Ku dubidda baradhada macaan foornada waxay qaadataa ugu yaraan 50 daqiiqo laakiin microwave-ka, sidaan maanta u diyaarinayno, kuma qaadan doonno wax ka badan 15 daqiiqo. Kaliya waqti ku filan si loo diyaariyo buuxinteena. Miyaad ku dhiirrataa inaad isku daydo?
2 baradhada macaan ee dhexdhexaadka ah
1 basal dhexdhexaad ah, la shiiday
100 g. boqoshaada
6 basbaas piquillo ah oo jajab ah
1 koob oo soy ah
Dhaq oo qalaji baradhada macaan oo dhan, ku kari fargeeto iyo iyaga ku kariyo microwave-ka 14 min heerkulka ugu sarreeya.
Dhig qooyay soy biyo kulul oo u daa biyo 15 daqiiqo.
Dhanka kale, digsi shiil basbaas uga dhig saliid daadanaya 4 daqiiqo.
Ku dar boqoshaada oo kari ilaa ay midab yeeshaan.
Marka xigta, ku dar basbaaska iyo soodhada qoraalka. Milix iyo basbaas, ku dar xawaashyadaas aan aad u jecel nahay iyo ka gudub setka 4 daqiiqo oo dheeri ah.
Ka qaad baradhada macaan foornada, samee cutitaan dheer xagga sare oo wax yar ka fur.
Buuxi iyaga isku dar ah ka soo skillet iyo u adeega baradhada macaan ee kulul.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Recipes » Saladyada iyo khudradda » Baradho macaan oo laga buuxiyey soy iyo boqoshaada
Sida loo isku daro midabada hore